Huawei သည် OSPO ကို OPPO နှင့် Xiaomi | Androidsis
Donald Trump ဦး ဆောင်သောအစိုးရနှင့်အစိုးရအကြားတင်းမာမှုများမြင့်တက်လာခြင်းသည်ကြီးထွားမှုကိုမရပ်တန့်စေကြောင်းထင်ရှားသည်။ ရန်အငြင်းပွားဖွယ်ဗီတိုအာဏာပြီးနောက် Huawei, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဖြင့်အုပ်ချုပ်သောအစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်ရေတွက်နိုင်တော့မည်မဟုတ်သောအရာ, အာရှထုတ်လုပ်သူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ကုမ္ပဏီသည်ဤဗီတိုအာဏာကိုမျှော်လင့်နေသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လည်ပတ်မှုစနစ်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဥရောပမှာမင်းနာမည်လား ARK OS.
တကယ်တော့, Huawei ၏ OS အမည်မရှင်းလင်းပါသို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်သည်မှာ Shenzhen အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သူသည်၎င်း၏ OS ကိုယခုနှစ်မကုန်မီစတင်ရန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်ကူးက ARK OS, သို့မဟုတ် OAK OS သည်အောက်တိုဘာလတွင် Huawei Mate 30. နှင့်အတူအလင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သို့သော်သတိပြုပါ၊ အခြားထုတ်လုပ်သူများသည်သူတို့၏ operating system ကိုသုံးနိုင်သည်။
Xiaomi နှင့် OPPO သည် Huawei ၏လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်
နောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလများအရတယ်လီဖုန်းဈေးကွက်တွင်ကစားသမားနှစ် ဦး သည် Huawei ၏လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုစမ်းသပ်နေသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ OPPO နဲ့ Xiaomi အကြောင်းပြောနေကြပါတယ်။ ဒီကဏ္theမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုကဘယ်သူတွေလဲ ARK OS ကိုခုန်ကျော်နိုင်ပြီ၊ ဂူးဂဲလ်အတွက်ပိုပြီးခက်ခဲလာမယ် စတင်သူများအတွက် Mountain View အခြေပြုထုတ်လုပ်သူသည် ၄ ​​င်း၏အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်သောကြောင့်ဟွာဝေအားဤဗီတိုအာဏာမလိုချင်ပါ။
ဒါ့အပြင်စိတ်ကူးသော Xiaomi နှင့် OPPO တို့သည် Huawei ၏ရာထူးများတွင်လည်းပါ ၀ င်သည်၎င်း၏ operating system ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အင်တာနက်ကုမ္ပဏီကြီးအတွက်သတင်းဆိုးဖြစ်သည်။ ပြီးတော့အာရှစိတ်ဓာတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီကောလာဟလကပိုများလာနိုင်တယ်။ ARK OS ကကျွန်တော်တို့ကို Google application store ကိုခွင့်ပြုမယ့် Android fork တစ်ခုဖြစ်တယ်၊ ဒါ့အပြင် WhatsApp အပါအ ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုရယူနိုင်တယ်။ ဂူဂဲလ်အတွက်တော့တော်တော်ဆိုးတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Huawei သည်အမေရိကန်နှင့် Google ကိုစိန်ခေါ်သည်။ Oppo နှင့် Xiaomi သည်သူတို့၏လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုစမ်းသပ်နေပြီဖြစ်သည်
လူတိုင်းမမြင်ဘဲ Telegram တွင်ဖျက်လိုဖျက်ဆီးသူများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပို့နည်း